Juda Rotary Kiln- 600t / d × 2 Khadadka wax soo saarka- mashruuca EPC
Dulmarka Mashruuca iyo Guudmarka Mashruuca Miisaanka Guud ahaan qorshaha dhismaha ee mashruuca nuuradda, waxaa la qorsheynayaa in la dhiso 2 khadadka wax soo saarka lime ee firfircoon, mid kasta oo maalin kasta soo saaraya 600 tan. Marka loo eego shuruudaha dhismaha, hal foorno oo leh awood wax soo saar oo ah 600t / d ayaa lagu dhisi doonaa wajiga koowaad, mid kale oo leh isla miisaan ayaa lagu dhisi doonaa wejiga labaad, ugu dambeyntiina wuxuu sameysanayaa qaab-soo-saar ah 2 * 600t / d foornooyinka wareega. Sida ku cad shuruudaha biddi ...
Juda Rotary Kiln-600 tan maalintii x 1 Khadadka wax soo saarka-Mashruuca EPC
Iskuxidhka Nidaamka Baaxadda EPC ee mashruucan (1) Nidaamka soosaarida alaabta ceeriin ee nuuradda (kaydinta iyo baaritaanka, keydinta shaashadda hoosteeda iyo gaadiidka) (2) Nidaamka calcining Rotary kilin (preheater, rotary killer, qabow, iwm) (3) keydinta badeecada iyo gaadiidka, burburin, baaris iyo wax soo saar (4) Nidaamka diyaarinta budada dhuxul (5) Qashinka dabka wareega iyo nidaamka ka saarida boodhka (6) Nidaamka xakamaynta otomaatiga ah Sharaxaadda mashruucan a) Awoodda alaabta ceeriin st ...
Nidaamka kululeynta kululeynta ee Rotary
Quudinta iyo soosaarida nidaamka 1.Limestone ardaaga keydinta alaabta ceeriin ~ 6500t. Qalabka ceeriin waxaa lagu baaraa shaashad birqaya oo culus; quudinta waxaa gudbiya suumanka weyn ee qaada suunka. Silo wareega ah waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka la dhammeeyay, 2 10-50mm silo alaab ah oo dhammaatay, siloo kasta oo leh mugga keydinta ee qiyaastii 1000t ah; 1 silo shey oo dhammeystiran oo kayar 3mm, mugga keydku waa 200t. Lime leh cabbirka hadhuudhka ee 10-50mm ayaa loo qaadayaa warshadda birta iyada oo baabuur ah; liin leh GR ...
Nidaamka kiliyaha iyo shidaalka Dulmarka guud ee nidaamka calcination Naqshadeyntaani waxay doorbideysaa foornada wareega oo leh preheater taagan iyo qaboojiye, leh heerkulka preheating ee nuuradda sare, iyo preheater-ka toosan wuxuu qaadan karaa heerkulka gaaska ee qiiqa badan, taas oo ka dhigi karta nuuradda inay qeyb ahaan ku bur burto preheater-ka . Marka isticmaalka kuleylka ayaa ka hooseeya noocyada kale ee foornada wareega. Vatieties Calcined Lime firfircoon Cabbirka foornada wareega Φ4.0m × 60m Tirada 2 khadadka wax soo saarka maalin kasta ee n600t kasta ...
Qaab dhismeedka iyo astaamaha Mashiinka wareega wuxuu ka kooban yahay dhululubo, qalab taageeraya, aaladda gudbinta, aaladda wheel wheel haynta haadka, dabada kiliyaha iyo madaxa foornada. Jirka foornada ayaa u janjeera xagal 3.5% ah. Ku rakibay 2 nooc oo ah qalab taageeraya, dhalida taageerayaasha duubistu waa qaaddo biyo qaboojiye oo biyo dhalaalaya u dhalaalaya. Giraangiraha hawo-haynta ayaa sidoo kale lagu qalabeeyaa giraanta qalabka weyn. Jirka foornada waxaa wada isdabajoog ah ...
Nidaamka Dhuxusha ee Rotary Kiln-ruugmay
Nidaamka Dhuxul Dhawaqsan Nidaamka gubidu wuxuu adeegsadaa dhuxul-gaas ku darsamay dhuxul isku dhafan, kaas oo u beddeli kara ama isku mar u isticmaali kara laba shidaal, isla mar ahaantaana kordhin kara foornada kuleylka leh iyo heerkulka foornada. Si loo buuxiyo shuruudaha xuduudaha sida cabbirka walxaha dhuxusha iyo heerka socodka ee habka kalinta lime ee foornada wareega, mashruucani wuxuu naqshadeeyaa saldhigga diyaarinta budada dhuxusha. Marka la eego tayada dhuxusha ceyriin ee ay bixiso warshadda iyo ...
Nidaamka Ilaalinta Deegaanka ee Rotary Kiln
Sharax kooban oo ku saabsan geedi socodka wax soosaarka Nuuradda xaddiga hadhuudhka ee u qalma waxaa loo diraa xagga sare ee 1 # kilkilaha wareega oo ay soo saarto xambaariye weyn oo suunka qaada, oo lagu sii daayo shaashadda sare ee 1 # preheater kiliyaha oo wareega iyada oo loo marayo qaybiyaha saddex-geesood ah, ka dibna nuuradda ayaa loo qaybiyaa preheater-ka tooska ah ee loo yaqaan 'chute', ama laga soo dejiyo 2 # suunka, oo loo wareejiyo silo sare ee 2 # foornada wareega, ka dibna nuuradda ayaa loo qaybiyaa preheater-ka qiiqa. Marka nuuradda soo gasho pr ...
Nidaamka Rotary Kiln-Kaydinta
Xisaabinta dheelitirka maadada 1) Awoodda wax soo saar ee loo qaabeeyey foornada wareega: 600t / d. 2) Qiyaasta luminta kaydinta nuuradda iyo baaritaanka: 1% 3) Isticmaalka alaabta ceeriin ee foornada wareega ah: 1.79t nuuradda / t quicklime 4) Wixii ceeriin ah 25-50mm, waxyaabaha ku jira <25mm waa inaysan ka badnaan 5% 5) Kaydinta iyo heerka luminta gaadiidka ee baaritaanka alaabta la dhammeeyay: 1% 6) Maalmaha shaqada ee foornada: 333 maalmood Nidaamka shaqeynta oo xasilloon MAYA. Shayga Maalmaha Ereyga / Sannadka Kooxda Shaqada / Maalinta Shaqooyinka / Kooxda 1 Ra ...
Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 khadadka wax soo saarka liinta ee bey'ada u fiican
Jude kiln - 100 tan / maalintii habka wax soo saarka -EPC mashruuca
Lime waa sheyga ugu weyn uguna muhiimsan ee wax soo saarka birta, soosaarida kaalshiyamka kaalshiyamka, soosaarka diidmada, soosaarka alumina. Gaar ahaan xilligan cusub, tikniyoolajiyad cusub, alaabooyin cusub ayaa sii wadaya inay soo saaraan walxaha kaalshiyamka oo aad iyo aad loo adeegsado ...
Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line,